क्षेत्रको विकासको र मधेसी जनताको पहिचान तथा आत्मसम्मानका लागि - Birgunj City
क्षेत्रको विकासको र मधेसी जनताको पहिचान तथा आत्मसम्मानका लागि
बिरगंज सिटी २९ कार्तिक २०७४, बुधबार ०७:२३मा प्रकाशित (२ साल अघि) ९८१३ पाठक संख्या
१. तपाईंको उम्मेदवारी किन?
चुनाव जित्नका लागि, जितेर केही गर्नका लागि अनि यस क्षेत्रको बिकासको लागि, पहिचान र आम मधेसी जनताको आत्मसम्मानको लागि ।
२. प्राथमिकताका आधारमा तपाईका तीन मुख्य अजेन्डा बताउनुहोस् ।
परिवर्तन, विकास र आत्मसमानको नारा लिएर मँ चुनावी मैदानमा उत्रेको छुँ । संघीय ब्यवस्था सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान मधेसी जनताको माग हो । संघीयतालाई मधेशी जनताले आन्दोलन गरेर मुलुकको संबैधानिक र राजनीतिक अजेण्डा बनाए । संबिधान जारी हुने बेला भने मधेशीलाई आत्मीयता महसुस गर्न दिइएन । माग समेट्न भन्दा गोली हानियो । संबिधानलाई संसोधन गराउने र सवैको अपनत्व त्यसमा कायम गर्ने काम ठुला भनिएका दलहरुले हुन नदिन चाहेका छन् । यस राजनीतिक षडयन्त्र बिरुद्ध मेरो उम्मेदवारी हो । अधिकार, पहिचान र विकास स्थापीत गराउने मुख्य अजेण्डा हो मेरो । जनताले मेरो भुमिका देखेका छन्, म भारी बहुमतसाँथ जित्छुँ ।
३. मधेशका अधिकारका लागि संबिधान संसोधन गर्न त प्रतिनिधिसभामा बहुमत चाहिन्छ नी ?
तपाईले भन्न खोज्नु भएको प्रश्नको भाव मैले राम्ररी बुझि सके । एउटा कुरा के बिचार गर्न पर्ने छ भने बहुमतले मात्र हुदो रहेनछ । संबिधान जारी गर्नेहरुसंग त निकै बहुमत थियो । तर, समावेशि ब्यवस्था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचान, अधिकारमा समाना लगायतका लोकतान्त्रि कुरामा राजनीतिक न्यायका कुरामा उनीहरु बिपक्षमा उत्रिए । अझ हामीले यसको पक्षमा माग राखि आन्दोलित हुँदा हामी माथी गोली चलाइयो । हाम्रा दाजु भाईलाई मारियो । कतिपयलाई मुद्दामा फसाई जेलमा हुलियो । दमन गरियो । सरकारका बर्दी र उर्दी भिडेकाहरु घरघरमा पसेर निर्दोषहरुलाई कुटे । राजनीति माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि त्यसको पक्षमा बोल्ने आवाज उठाउने र संघर्ष गर्ने मन र आत्मा चाहिन्छ । हाम्रो बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्व चाहिन्छ सदनभित्र संघर्षका लागि । हामी मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, दलित र हरेक पाछाडी पारिएका जनताका लागि सडकमा संघर्ष गरी रहेकै छौं, जितेर गएपछि सदनभित्र पनि गर्छौ ।
४. काँग्रेस र एमालेका उम्मेदवारको दावी छ हामी गराउछौं संबिधान संसोधन । जले गराए पनि कुरा त उही हो नी ?
जालि, जलसाजी र धोकेबाजी कुरा हो यो । जनताले कठालो समातेर सोध्नु पर्यो मधेसीको छाति र निधारमा गोली हान्न लगाएर संबिधान जारी हुने बेला त्यसमा सही किन गरिस् ? मधेसको पक्षमा संसदमा कति पटक बोलिस । आफ्नो पार्टीभित्र आफ्ना नेताहरुसंग कतिपटक बहस गरिस मधेशको पक्षमा ? उनीहरु सधैं जनतालाई ठग्दै आएका छन् फेरी पनि जालमा पार्न चाहन्छन् ।
५. तपाईले जनतासंग भन्ने कुनै एउटा कुरा के छ ?
भोट दिनुस भन्छुँ मलाई मशाल छापमा फोरम राजपा गठबनधनका हरेक उम्मेदवारलाई जिताउनुस् । भोट गर्नुस आफ्नो अधिकारका लागि स्वभिमानका लागि ।
साभार : यात्रा डेली
सबै काम गुणस्तरीय र दिर्घकालिन आयु हुने गरी भईरहेको छ : वडा अध्यक्ष तुफान फाँरुक अंसारी
अहिले २ वर्ष बितेको छ नि, बाँकीको कार्यकालसम्म हेर्नुस् न, विकासमा प्रदेश २ सबैको प्रेरणादयी बन्छ : अर्थराज्यमन्त्री यादव
गाउँपालिकालाई नेपालकै नमुना बनाउँछु : सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदिप जैसवाल
मधेसी जनताले यसपाली मधेसलाई जिताउँछ – यादव
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १८:३५
‘मानवलाई खाना खुवाउने’’ अभियान सातौ दिन पनि निरन्तर जारी
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १८:०८
सखुवा प्रसौनी गापाको लखनपुरमा एक युवाको व्यक्तिगत लगानीमा नाला सफाई
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १७:४६
बन्दाबन्दीमा विकास योजनाको तिब्रताले स्थानीयमा खुसी, प्रदेश सभासद पटेलले गरे ढलान सडकको उदघाटन
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १६:५८
थप २२६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमित संख्या १७ सय ९८ पुग्यो
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १६:४०
नेपालमा थप ४८ जना भेटियो कोरोना संक्रमण, संक्रमित संख्या १६ सय १५ पुग्यो
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १०:००